Imaaraadka oo raadinaya qaab uu wax uga badalo istiraatiijiyadiisa Soomaaliya! (Xogo Cusub) – Mudug24
Homewararka DalkaImaaraadka oo raadinaya qaab uu wax uga badalo istiraatiijiyadiisa Soomaaliya! (Xogo Cusub)
Imaaraadka oo raadinaya qaab uu wax uga badalo istiraatiijiyadiisa Soomaaliya! (Xogo Cusub)
Muddo xiriiro qabow ah ka dib, Imaaraadka Carabtu (UAE) waxa ay hadda doonaysaa in ay dib ugu laabto Soomaaliya, iyada oo ku yaboohay in dib loo furayo Isbitaalka Sheekh Zayed ee magaalada Muqdisho, kaas oo xirmay labo sano ka hor. Hase yeeshe Imaaraadka xiriirkiisa waxa uu maraa dhaqaalaha iyo gargaar.
Soojeedinta ayaa timid ka dib markii Imaaraadku si KMG ah 20 June 2020 ula wareegay jasiiradda Socotra ee ku taal Gacanka Cadan,taas oo Imaaraadku uu indhaha ku hayey in muddo ah sidoo kale ay sheegtaan Dowladaha dagaalku hareeyay Soomaaliya iyo Yemen.
“Imaaraadka Carabtu waxaay isku dayeysaan in ay dib ugu laabtaan buugaagta wanaagsan ee Soomaaliya sababo kala duwan awgood. Sababaha ugu muhiimsan ee xarumaha istiraatiijiga ah ee Socotra Archipelago, ”ayuu yiri Mohammad Shire, oo ah bare wax ka dhiga Jaamacadda Portsmouth Universalty, oo la hadlay Al-Monitor.
Jasiiraddu waxay ku taal bartamaha mid ka mid ah wadooyinka ganacsiga saliidda ugu muhiimsan waxayna gacanta ku haayay Imaaraatka labadii sano ee la soo dhaafay waxa uuna u ahaa saldhig muhiim ah oo kaabaya mashariicda milatari iyo danaha dhaqaale ee Imaaraadka.
Imaaraadka iyo xiriirka Soomaaliya hoos ayuu u dhacay si lama filaan ah ka dib qalalaasaha khaliijka ee sanadkii 2017, Soomaaliya ayaa diidey in ay qaaddo istiraatiijiyada UAE iyo Sacuudiga ee ka dhanka ah Qatar, taa bedelkeedna waxa ay door bidday dhexdhexaadnimo.
Bishii May ee 2018, Imaaraadku wuxuu ka noqday gargaarkii bini’aadanimo iyo barnaamijyada iskaashiga milatari ee uu ka waday Soomaaliya si loo ciqaabo oo loogu cadaadiyo in ay taageerto Soomaaliya mowqifkooda ka dhan ah Qadar. Waxay [UAE] sidoo kale ugu talo gashay in ay daciifiso saamaynta Qadar iyo Turkiga, oo xariir adag la leh Soomaaliya.
Imaaraadku wuxuu markaa doonay xiriir adag in uu la yeesho gobolka iskiis madaxbanaanida ugu dhawaaqay ee Somaliland iyo Puntland oo ka tirsan Soomaaliya, halka ay taageerayaan siyaasiyiinta mucaaradka ee ku sugan Muqdisho.
Shirkadada DP World ee laga leeyahay Imaaraadka ayaa ku maalgelisay $ 442 milyan doollar horumarinta deked ku taal magaalada Berbara ee Somaliland tan iyo Oktoobar 2018. hagaajinta joogitaanka Geeska Afrika waxa ay ka caawin doontaa Abu Dhabi inu u xakameeyo isu socodka ganacsiga iyada oo loo marayo istiraatiijiyadda Bab el-Mandb Strait, oo ah marin muhiim u ah caalamka iyo maraakiibta badda.
Tani waxay a sidoo kale xiriir la leedahay daba-galka Imaaraadka ee dekedaha koonfurta Yemen iyo jasiiradda Socotra – halkaasoo ay sidoo kale ay ka raadiso joogitaan millatari, si ay u hesho awood goboleed saameyn leh.
Hadana Soomaaliya waxa ay dhowr jeer cambaareysay doorka Imaaraadku ku leeyahay Jasiiradaha Soomaaliya. Waxay ka xannibtay tobanaan milyan oo doollar ah oo soo galaya Muqdishu kana yimid Abu Dhabi, oo loo qorsheeyay Somaliland, bishii Abriil 2018.
Dowladda Soomaalida ayaa sidoo kale sanadkii 2018 sheegtay in jabiyey shabakad lagu eedeeyay basaasiin oo malaayin dollar soo galiyay Magaaladda Muqdisho taas oo qayb qaadatay khilaafka Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta.
Caqabadahaas markii ay wajahday Imaaraadku waxa uu muujiyay muuqaal kale, isaga oo door bidaaya muuqaal bina-aadamnimo oo dheeraad ah in uu ku sii joogo Soomaaliya gaar ahaan markii uu bilaawday xanuunka Coronavirus.
Wasiiru dowlaha Arimaha Dibadda ee Imaaraatka Carabta Anwar Gargash ayaa khudbad uu ka jeediyay. Shirka Amniga UAE ee Abu Dhabi bishii Diseembar 2019 yiri . “Waxaan aaminsanahay in moodooyinka dambe door muhiim ah ka ciyaari doono taageerida, xasilloonida iyo horumarka Geeska Afrika,” .
Intii lagu guda jiray faafitaanka cudurka coronavirus, qaar ka mid ah wadamada hodanka ah ayaa qaaday talaabooyin “diblomaasiyadda oo loo marayo coronavirus” iyada oo gargaarka la xoojinayo si loo soo celiyo xiriirka gobolka iyo saameynta, Imaaraadka ayaa ka mid ah.
Bishii Abriil 14, Abu Dhabi ayaa Muqdisho u diray siddeed tan oo gargaar ah kaas oo loogu talagalay ka hortaga cudurka ‘coronavirus’ waxa ayna gargaarkaasi sii marsiisay Ururka Caafimaadka Adduunka ee WHO. Ka dibna bishii Maajo 12-keedii, Amiir Mohammed bin Rashed Al Makhtoum wuxuu gaarsiiyay dhowr tan oo kale oo gargaar ah caasimadda Soomaaliya, oo loogu talagalay cudurka coronavirus.
Si kastaba ha noqotee, Abu Dhabi wali kuma guulaysan in ay hagaajiso xiriirkeed Muqdisho waxaana haatan Soomaaliya galaysaa xilli kala guur ah.
“Haddii taariikhdu wax noo muujiso, waxaan shaki ku qabaa in gargaarka bini aadamnimada ee UAE uu soo saari doono saamayntooda gobolka,” ayuu yiri Shire.
Soomaaliya ayaa diiday taageerada Abu Dhabi ee dib u furitaanka isbitaalka waxayna dhaleeceysay doorka Imaaraadku ka leeyahay Yemen.
Wareysi uu siiyay Telefishanka Al-Arabiya bishii Juun 9, wuxuu Cawad mar kale dhalleeceeyay wax qabadka shirkadda “DP World” ee aan ruqsadda la siinin ee Somaliland iyo Puntland ka howl gasha taas oo xadgudub ku ah madaxbanaanida Soomaaliya, isagoo ka digay in tani ay sii xumayn karto xiriirka Soomaaliya iyo Imaaraadka.
Soomaaliya waxa ay qayb ahaan taageeri jirtay UAE – iyo tan ugu ballaaran, isbahaysiga uu hoggaamiyo Sacuudiga – ee Yemen, iyo Abu Dhabi sida muuqata waxa ay raadinayaan in ay soo nooleeyaan.
Dowladii hore ee Soomaaliya ee Xasan Sheekh Maxamuud waxa ay taageertay isbaheysiga uu hogaamiyo Sacuudiga. Waxa ay tan ku sameeyeen iyagoo si rasmi ah u oggolaaday adeegsiga hawadda, biyaha iyo dhulka Soomaaliya ee isbahaysiga u adeegsan karo duqeynta ka dhanka ah dhaqdhaqaaqa Xuutiyiinta Yemen, ”ayuu yiri Shire.
“Xaqiiqdi, xiriirka Xasan Sheekh ee Imaaraadka iyo Sacuudiga marka lagu daro ujeeddooyin dhaqaale ayaa ahaa mashinka koowaad – shaki kuma jiro arrintaas,” ayuu raaciyay.
Turkiga iyo Qadar waxay saameyn xoog leh ku dhex leeyihiin dowladda hadda jirta ee Soomaaliya ee uu hogaaminayo Maxamed C / llaahi Maxamed “Farmaajo” Muqdishona taas way ku kalsoonaan kartaa. Sidaa darteed, UAE waxa ay ku dhibtoon doontaa in ay dhaqaale ku soo jiidato Xukumada Muqdisho.
“Doorashada Soomaaliya ee  waxa Ay noqon kartaa kiis Abu Dhabi oo isku dayayso in uu helo maamulka mustaqbalka ee awoodda ku yeelan kara Soomaaliya,” Cabdullaahi Halakhe, falanqeeyaha maamulka, amniga iyo nabadda Afrika , ayaa u sheegay Al-Monitor.
Hase yeeshee, haddii ay taageeraan murashax kale ama madasha xisbiyada mucaaradka ee ka soo horjeedda madaxweynaha hadda jira – waxay raadsan karaan in ay kaalin ka qaataan, ”ayuu yiri Halakhe.
Marka laga hadlayo caqabadaha noocaas ah, Abu Dhabi waxa u furan dhowr hab.
“Carada sii kordheysa ee ka dhanka ah joogitaanka Imaaraatka Carabta ee Socotra, Imaaraadku wuxuu isku dayayaa in uu saameyn ku yeesho Soomaaliya si uu u xoojiyo sheegashadeeda jasiiradaha una istcimaalo tartamayaasha in ay daliil u noqdaan joogitaankooda,” ayuu yiri Shire. Taariikh ahaan, Muqdisho si rasmi ah uma sheegan jasiiradaha sababtuna waxa ay tahay isu soo dhawaanshaha. Laakiin waxay si rasmi ah u sheegatay jasiiradaha horaantii 2010-kii markii Soomaaliya ay ku dhawaaqday EEZ [aag dhaqaale oo gaar ah].
Wuxuu intaas ku daray, “Imaaraadku waxa uu doonayaa in uu ka helo bog ka mid ah ‘qalalaasaha qaboobaa. Xukuumadda Hadi iyo dawladda Soomaaliya, iyada oo lagu hayo khilaaf qabow si loo horumariyo saamaynteeda siyaasadeed iyo mid awoodeed ee gobolka.
Dhanka kale, Abu Dhabi waxa ay la kulantay dib u dhacyo kale oo ka dhacay Soomaaliya. Bishii Sebtember ee la soo dhaafay, maamulka Somaliland waxa ay go’aansadeen in ay saldhig millatari Imaaraadku ka dhigaan maddaarka rayidka, ka dib markii Abu Dhabi bilaabay dhismihiisa 2017.xiriirka Imaaraatka ayaa laga yaabaa in uu ka furmo Somaliland, taas oo xaddidi doonta saameynteeda gobolka, in kasta oo ay qabsatay Socotra.
W/Q: Mowlid Mo’alim Adem
Booliska Germalka oo lagu eedeeyay Dilka Rooble Warsame iyo Banaanbaxyo ka dhacay Hamburg
War-murtiyeed laga soo saaray Shirka Wada-tashiga ee Dowladaha Xubnaha ka ah Dowladda Federaalka Soomaaliya Dhusamareeb (Daawo Sawirada)